Nabadsugidda oo ku daba jirta nin ammaanka looga shakisan yahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Säkerhetspolisens huvudkontor ligger i Solna i Stockholm. Foto TT
Nabadsugidda oo ku daba jirta nin ammaanka looga shakisan yahay
La daabacay onsdag 18 november 2015 kl 18.56
Shir saxaafadeed ey ciidanka boliiska iyo nabad-sugidda SÄPO wada jir caawa u soo saareen ayaa lagu sheegay in ay Iswiidhan kor u qaadayso heerka diktoonanta amaanka oo laga qaaday heerkii saddexaad lana gaarsiiyey heerka afraad, halka uu heerka ugu sarreeyaana yahay heerka shanaad.
SÄPO ayaa mar dhoweed ku dhawaaqday in hanjabaad Iswiidhan halis ku ah ay arkeen maalmihi ugu dambeeyay. Sidaas waxa sheegay Anders Thornberg oo ah madaxda SÄPO.
Sababta ayaa ah in nin Iswiidhan gudahiisa jooga la raadinayo. Ninkan oo u xeer ilaaliyaha kiiskan maxkamadadeed bilaabay go´aamiyay in u boolisku si degdeg ah u qabto dabeetana la xidho marka gacanta lugu dhigo. Ninkan ayaa laga shakiyay in u isku diyaariyay in u fal argagaxiso Iswiidhan ka sameeyo.
Tan ayaa ka dhigan in u booliska amaanka ee SÄPO , sida u Anders Thornberg madaxda heeyadan u sheegay ,ilaalista kor ugu qaadi doonan dhowr meelood oo ku yaala waddanka, in intaas ka badan ma sheegi karo, ayuu sheegay.
Hasayeeshe tan ayaa saameeyn ku yeelan doonin shacabka Iswiidhan degan, xidhiidh na la laheeyn falalkii argagaxiso ee jimcihii ka dhacay Fraansiiska, ayuu jidhi Thornberg.
-Waxaan doonayna in u dadweynaha Iswiidhan nala soo xidhiidhaan hadii ay wax ka shakiyaan, wararka ugu dambeeya na la socdaan, hasayeeshe ayuu sheegay Anders Thornberg madaxda SÄPO, maaha in la welwelo amba la baqo.
Waddanka Denmark ayaa iyaguna maanta kor u qaaday heerka diktoonanta,sababta oo ah falalkii argagaxiso ee jimcihii ina soo dhaafay ka dhacay magaalada Pariis ee waddanka Fraansiiska.
Anna Kindberg Batra hogaamiyaha xisbiga Moderaterna ayaa tidhi:
-Iswiidhan waa waddan aduunka ka mid ah, waa in ay bulshadda Iswiidhan fahanto khatarta aanu ku suganahay. Wa in sharci cusub oo mamnuucaya dhoofka xaqjirka ah si deg deg ah loo soo dejiyo, ayey sheegtay.
Sida ay booliska amaanka hore u sheegeen ugu yaraan 300 muwaadiniin Iswiidhish ah ayaa u dhooftay Suuriya iyo Iraaq si ay ula garab dagaalamaan kooxda argagaxisada ah ee Daacesh amba IS loo yaqaano, halkey ugu yaraan 100 ka mid ah kuwan ka soo laabteen dagaaladan.
Caawa saacadu markey tahay 19:00 ayuu wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman shir saxaafadeed oo arrimahan ku saabsan qabaan doona.